Baidoa Media Center » Furitaanka bacadlihii Xamarweyne oo dib loo dhigay.
Furitaanka bacadlihii Xamarweyne oo dib loo dhigay.
October 16, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Waxaa dib loo dhigay furitaanka bacadlaha Xamarweyne sida uu sheegay maamulka gobolka Banaadir oo arintaas maanta ka hadlay.
Afhayeenka ayaa sheegay in dib loogu dhigay qaybinta baqtiyaanasiibka ilaa iyo 25 bishaan aan ku jirno ee Oktoober ayada oo ay munaasabada qaybinta baqtiyaanasiibka lagu degayo qolalka bacadlaha Xamarweyne lagu qaban doono City Plaza Hotel.
Bacadlaha Xamarweyne ayaa la dhisay sanadii 1981dii ayada oo ay qoysas deganaayeen xiligii dagaalada sokeeye ay ka socdeen magaalada Muqdisho ilaa ay dowladii KMG ahayd ka saartay qoysaskaas iyo dadkii gacanta ku hayay dhismaha bacadlaha Xamarweyne.